Umgaqo oshushu wokufudumeza-umatshini wokufudumeza ngaphakathi | izisombululo zokungenisa ubushushu
ukutshisa umgangatho wokupasa
Kuyintoni Ukutshisa Ukunyuka?
Ukutshisa ukutshisa yinkqubo yokufudumala into eyenza ugesi (ngokuqhelekileyo isinyithi) ukufakelwa kwamagetsi, apho iindawo ezijikelezayo ezibizwa ngokuba yi-Foucault currents) ziveliswa ngaphakathi kweso sinyithi kunye nokuchasana kubangela ukufudumala kwe-Joule kwisinyithi. ukujikeleza i-coil, ukujikeleza kwangoku (okwenziweyo, okwangoku, okwangoku) okwenziwe kumsebenzi (izinto eziphathekayo), ukushisa kukhiqizwa njengokuba uhla lwangoku luhamba ngokubhekiselele kubukho bempahla.Imigaqo-siseko yokufudumala ukutshisa ziye zaqondwa kwaye zafakwa kwimveliso ukusuka kwi-1920s. NgeMfazwe Yehlabathi II, i-teknoloji yakhula ngokukhawuleza ukuba ihlangabezane neemfuno zexesha eliphuthumayo leemfazwe zenkqubo yokukhawuleza, enokwethenjelwa kwiinkampani zensimbi zomelele. Ngoku kutshanje, kugxininiswa kwindlela yokuvelisa ngokunyamekileyo kunye nokugxininiswa ekulawulweni komgangatho ophuculweyo kukhokelela ekubuyiseni ubugcisa be-induction, kunye nokuphuhliswa ngokuchanekileyo, zonke izibonelelo zamandla okuqulunqa amandla.
Indlela yokuHuselwa kweNdleko yokuSebenza?
An yokutyhubela (nayiphi na inkqubo) iqukethe coil induction (okanye i-electromagnet), apho i-AC ehambayo ephezulu ekhoyo. Ukushisa kungaphinda kuveliswe ukulahlekelwa kwamagnetic hysteresis kwizinto eziphathekayo ezinobungakanani. Ubume be-AC esetyenziswayo buxhomekeke kubukhulu bezinto, uhlobo lohlobo, ukudibanisa (phakathi kwekhoyili yomsebenzi kunye nenjongo yokufudumala) kunye nobunzulu bokungena. Ukufudumala kwe-Frequency Frequency Induction yinkqubo esetyenziselwa ukukhonkxa, ukukhuniza okanye ukunciphisa isinyithi okanye nezinye izinto zokuqhuba. Kwiinkqubo ezininzi zokukhiqiza zanamhlanje, ukufudumala ukukhutshwa komzimba kunika inhlanganisela ekhangayo yokukhawuleza, ukuhambelana nokulawula.
Yintoni iZicelo zokuFudumeza
Ukutshisa ukutshisa ifom yokufudumala engahlambulukanga, engcolileyo, engasetyenziselwa ukutshisa izitye okanye ukutshintsha iipropati zezinto eziphathekayo. Ikhoyili ngokwayo ayifuni kwaye ifuthe yokushisa ilawulwa phantsi. I-static state transistor iteknoloji yenze ukufudumala okutshintshileyo kulula, ukufudumeza okuninzi okunokusetyenziswa kwezicelo ezibandakanya ukukhangela i-soldering ne-braceing brazing, ukunyusa ukutshatyalaliswa kokushisa, ukuchithwa kwe-induction, ukuchongwa kwe-induction njl.
iindidi FAQ tags iingenelo zokufudumala ukunyusa, ezisisiseko zokufudumala, indlela yokutyhulwa komsebenzi wokushisa, lokutshisa, ukutshisa umgangatho wokupasa, yiyiphi inkunkuma yokutshisa